Cameron.....: March 2014
ကြက်ဥစတူး... လုပ်နည်း အိုးတစ်လုံးထဲကိုပြုတ်ပြီးသားကြက်ဥများမြှုပ်ရုံရေထည့် နာနတ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ထည့် ပဲငံပြာရည်အနှောက်ထည့် ကြက်သွန်ပင်နှစ်ပင်လောက်ကိုထုံးထည့် ဆား သကြားထည့်ပြီး ဆူတောင်တည်ပါ ကြက်ဥများထည့်ပြီး ကြက်ဥအညိုရောင် သန်းလာတဲ့အထိ ရေများခန်းခါနီးထိ တည်ပါလေ..။ စားခါနီးမှာ မီးဖိုသုံးချည်ကြိုးလေးနဲ့ထက်ပိုင်းဖြတ်ပါ အရည်လေးဆမ်းပါ...။ ငရုတ်သီးဆော့နဲ့စားသုံးပါ...။ ဈေးထဲမှာ တောသည်ဆီက ကကူရန်ခြောက်လေး နှစ်ထောင်ဖိုး ၀ယ်ခဲ့တယ် ရေစင်စင်ဆေး ရေဆူဆူမှာ ခဏလောက်စိမ်ပြုတ်တယ် ပြန်ဆည်ပြီးအအေးခံ အသားနွှင်ထားတယ်..။ ဆီပူအိုးမှာ ကြက်သွန်နှစ်များဆီသတ် နနွင်း ငရုတ်သီးမှုန့်ထည့် ခရမ်းချဉ်သီးပါးပါးလှီးတာထည့်မွှေ ခရမ်းချဉ်သီးလိတ်သွားရင် ငံပြာရည် အပေ့ါအငံထည့်ပြီး ငါးခြောက်ထည့်နှပ်ပါ...။
ငါးထမင်းနယ်... မှန်တာပြောရရင် ဒါပထမဆုံးအကြိမ်လုပ်ဖူးတာ...။ အိမ်မှာ ငါးရံ့ဆားလူးမီးကင် အကောင်ကြီးကြီးတစ်ကောင်ရထားလို့ သူ့အသားငါးပိချက်တန်သည်ချက်နဲ့ တချို့ကို ငါးထမင်းထဲထည့်နှယ်လိုက်တယ်...။ ကြက်သွန်ဖြူကိုဆီသတ် နနွင်း(အရောင်လိုသလောက်ထည့်)ပြီး ငါးမျှင်များကိုထည့်သတ်ပါတယ်...။ ခပ်စေးစေးချက်ထားတဲ့ထမင်းနဲ့ အာလူးပြုတ်ထည့် ဆားနဲနဲထည့်ပြီး နာနာနယ်လိုက်တယ်...။ ပြီးတော့ အလုံးဖြစ်ဖြစ် အပြားလေးဖြစ်ဖြစ်လုပ်ထားတယ်...။ စားခါနီး ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက်လေးဖြူးငရုတ်သီးကြော်လေး ဂျူးလေးနဲ့စားပေါ့ကွယ်..။
ဆိုင်က အသားကင်အခေါက်ကင် နှစ်ထောင်ဖိုးဝယ်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူဆီသတ် သူ့ပါလာတဲ့ ပဲငပိရည်လေးနဲ့ ပြန်ှနှပ်ထားတယ် ကြက်သွန်မှိတ်အုပ်တယ်...။ ငွေနှင်းမှိုလးကို ငရုတ်နီနဲ့ ခရုဆီနဲ့ကြော်တယ် ချဉ်စော်ခါးသီးခြောက်ကို ရေဆူဆူထဲပစ်ထည့် ဆား ဟင်းခတ်မှုန့်ထည့် ပဲပြားတုံးလေးတွေထည့် ချဉ်စော်ခါးသီးအချဉ်ဓါတ်လေးကျလာပြီဆို ငရုတ်သီးစိမ်း ဂျင်းတက်လေး ဓါးပြားရိုက်ထည့်ပြီး မီးပိတ်လို့ရပြီ... နှစ်သက်ရာ တရုတ်နံနံ မြန်မာနံနံ ကြက်သွန်ပင်တို့ကိုဖြူးပေးပါ...။
ဒါကတော့ ငပျင်းဟင်းချက်တဲ့နေ့ဆိုပါတော့ အလွယ်ပဲ ဘဲဥချဉ်ဟင်း ကြက်အူချောင်းကြော်နဲ့ ပဲတောင့်ရှည်ကြော်...
ပဲပုပ်စေ့က တောင်ကြီးကလက်ဆောင်ရထားတာ...။ ပဲပုပ်တို့ထုံးစံ အနံ့တော့နဲနဲပြင်းတယ်...။ ကြက်သွန်ဖြူ နီ ဂျင်းကို မွေှ့းနေအောင်ကြော် ညိုရောင်သန်းလာရင် ခရမ်းချဉ်သီးပါးပါးလှီးတစ်လုံးနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းပါးပါးလှီးတာထားထည့်ကြော် ခရမ်းချဉ်သီးလိတ်ပြီဆို ပဲပုပ်စေ့ထည့်ကြော် ဆီနဲနဲပိုထည့်ပါ ပဲပုပ်စေ့ကိုခြောက်သွားတဲ့အထိကြော်ပေးပါ...။ အငံပါပြီးသားမို့ ဆားလျှော့ထည့်ပါ..။ ကြက်သားကို ဟိုတပတ်က မရမ်းသီးရထားလို့ ဆားစိမ်ထားတာလေးတွေနဲ့ချက်တယ်...သရက်သီးသနှပ်နဲ့ချက်သလိုပါပဲ ချဉ်ပြုံးလေး စားကောင်းတယ်...။ ကြက်သားကို ကြက်သွန်ဖြူနီဂျင်းအနှစ်နဲ့ ဆား ဟင်းခတ်မှုန့် နနွင်း ငရုတ်သီးမှုန့် ဆီတို့နဲ့နယ်ပြီး မရမ်းသီးဆားစိမ်လေးကိုရေးဆေးထည့် 15မိနစ်လောက်နှပ်ပြီးမှ မီးဖိုပေါ်လုံးချက်ပါ...။ ဆီပြန်လာရင် ရေလိုသလောက်ထည့်နှပ်ပြီး ရေခမ်းလို့ ကြက်သားနူးရင်ရပြီ..။ ရွှေဖရုံသီး ဟင်းချိုလေးက ရိုးရိုးလေးပါ...။ ဆီနဲနဲကိုကြက်သွန်ဖြူဓါးပြားရိုက်ဆီသတ် နနွင်းနဲနဲထည့် လှီးထားတဲ့ ရွှေဖရုံသီးလေး ထည့်ကြော် ရေနွေးလေး ထည့်ပြီး ဆူလာရင် 8မိနစ်လောက်တည်ထား အပေါ့အငံမြည်းပြီးရပါပြီ...။
Posted by Cameron at 11:435comments:
မချစ်(ချစ်ကြည်အေး)ကို ကိုယ်ဘလော့စရေးပြီး တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ကတည်းက သူ့စာတွေကို မပျက်သွားသွားဖတ်နေခဲ့တာ ယနေ့ထိတိုင်ပေါ့...။ အဲတုန်းက ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး ဆရာမတွေ မချစ်နဲ့မသက်ဝေ... တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်း ငယ်သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေ...။ အဲတုန်းကစဖတ်တော့ အစ်မရေးတဲ့ ခရီးသွားပို့စ်တွေကို သိပ်သဘောကျတာ ပုံလေးတွေနဲ့ရေးပြသွားတာ စိတ်ဝင်စားစရာ ပြီးတော့ ဇ၀နဥာဏ်ကလေးကလဲရှိတော့ ဖတ်ရင်လည်း တပြုံးပြုံးနဲ့ဖတ်ရတယ်...။ ခုနောက်ပိုင်း နှစ်နှစ်လောက်မှာ အစ်မက များသောအားဖြင့် အလွမ်းနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ အချစ်ဝတ္ထုလေးတွေ အရေးများလာခဲ့တယ်...။ ကိုယ်တောက်လျှောက်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ခရီးသွားပို့စ်တလှည့် ဘ၀ရသစာတွေ တလှည့်ဖြစ်နေချိန်မှာပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ 2013နှစ်ဦးပိုင်းကစပြီး ဗြုန်းဆို အစ်မက နုနုလှလှ အချစ်ဝတ္ထုတွေကို ဆက်တိုက်ရေးလာခဲ့တယ်...။ အကြောင်းအရာချက်ချင်ပြောင်းသွားပေမယ့် အရေးအသားက ပိုပိုပြီး ညက်ညောလာခဲ့တယ်..။
ပထမဆုံးအကြိမ် အစ်မနဲ့စတွေ့တာ 2011 မြေနီကုန်း ၀ိုင်ကေကေအိုဆိုင်မှာ အဲတုန်းက အစ်မမြသွေးနဲ့ ကိုဏီလင်းညိုတို့ ပါတယ်..။ အစ်မချစ်က ပြောင်းကင်မရာကြီးတကိုင်ကိုင်နဲ့ မရမ်းရင့်ရောင်ရင်ဖုံးလေး ၀တ်ထားတဲ့ အစ်မ အနက်ရောင်ဘောင်သေးသေးလေးခပ်ထားတဲ့ မျက်မှန်လေးပါတပ်ထားသေး..။ တစ်ခုကျန်သေးတယ်... မိန်းမဆန်ဆန်ရင်ဖုံးဝတ်ထားပေမယ့် လက်ကောက်ဝတ်မှာတော့ Sport နာရီးအနက်ရောင်ကြီးကြီး ပတ်ထားတယ်... အဲဒါဟာ အစ်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်လေးပါပဲ..။ အဲညက အမှတ်တရဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ဖြစ်ကြသေးတယ်..။ နောက်တစ်ရက်မှာ အစ်မနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးလျှောက်သွားကြတယ် လမ်းသုံးဆယ်နားတ၀ိုက် စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ စာအုပ်လိုက်ဝယ်ကြတယ် ပြီးတော့ မြေနီကုန်းက ရွှေရည်မှာ
မြန်မာမုန့်နဲ့ လက်ဖက်ရည် အတူထိုင်သောက်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်..။ လိုင်နာခပ်ထူထူဆွဲလို့ကောင်းမယ့် ဗာဒံစေ့ပုံ မျက်အိမ်လေး၊ နှာတံသွယ်သွယ်၊ နှုတ်ခမ်းထူထူတစ်စုံနဲ့ အစ်မမျက်နှာလေးကို ငေးမော ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်..။ စကားပြောသွက်လက်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ အစ်မနှုတ်ခမ်းထူထူတွေကို အနီရင့်ရင့်နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးလေးနဲ့ စိတ်ကူးပုံဖော်ဆိုးပေးခဲ့ဖူးတယ်...။ ဟုတ်တယ် အစ်မနှုတ်ခမ်းတွေက အနီရင့်ရောင်ဆိုးဆေးလေးတင်လိုက်ရင် သိပ်လှမှာပဲလို့ နှုတ်ကလဲဖွင့်ပြောလိုက်သေးတယ်..။ အစ်မက သူအိုင်ဖုန်းလေးနဲ့ ပန်းချီဆွဲထားတာကိုဖွင့်ပြခဲ့ဖူးတယ်...။ အစ်မလိုစကားပြောသံမျိုး ငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော်လေး ရင်းနှီးခဲ့ဖူးတယ် ဘယ်သူနဲ့တူလဲလို့သာ မမှတ်မိတော့တာ..။
ဒုတိယအကြိမ် ဆုံဖူးတာက ဗဟန်း ရွှေကောင်းဟော့ပေါ့မှာ...။ အဲဒီတုန်းက အစ်မက ဖုန်းအရင်ဆက်လာပြီး ဘလော့ဂါတော်တော်များများနဲ့ဆုံဖို့ ဟော့ပေါ့ဆိုင်မှာ ဘိုကင်လုပ်ထားပေးဖို့ပြောပါတယ်...။ လူအယောက်နှစ်ဆယ်အတွက် အခန်းတစ်ခုယူလိုက်တယ်...။ ခရီးလွန်နေတဲ့သူနဲ့ဘာနဲ့ တကယ်တန်းရောက်လာကြတာက ဆယ်ယောက်ကျော်ကျော်ပဲ...။ အစ်ကိုကြီးကိုပန်းသီးပါပါလာခဲ့တယ်...။ အစ်ကိုကြီးနဲ့က ပထမဆုံးဆုံဖူးတာ...။ စကားပြောအန်မတန်ကောင်းတဲ့သူ ပေါင်းသင်းဆန့်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ...။ သူထိုင်တဲ့ဝိုင်းမှာ အားလုံးက စကားမပြောတော့ဘဲ သူပြောတာကိုပဲ စိတ်ဝင်တစားရှိနေကြတာက သက်သေပဲလေ...။ အစ်ကိုကြီး ကိုပန်းသီးနဲ့အစ်မဟာ တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာ တော်တော်လိုက်ဖက်ညီ နားလည်မှုရှိတဲ့ သိပ်ချစ်ကြတဲ့စုံတွဲလေးပါ..။ ကိုယ်ကတော့ သူတို့ကိုကြည့်ပြီး အားကျရုံပဲရှိတာပေါ့...။
တတိယအကြိ်မ်ဆုံဖူးတာက အင်းလျာလမ်းထိပ်က Friendship ဆိုတဲ့ ယိုးဒယားစားသောက်ဆိုင်လေးမှာပါ..။ အဲမှာလဲ အစ်မ မရောက်ခင် ဖုန်းဆက်ထားလို့ တစ်ရက်ကြိုပြီး ဆယ်ယောက်ဝိုင်းကို အပြင်ဖက်လေးမှာ ဘိုကင်သွားလုပ်ခဲ့တယ်...။ ဆိုင်နာမည်လေးနဲ့ ဆုံတွေ့မယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သိပ်လိုက်ဖက်ပါတယ်...။ ဈေးသိပ်မကြီးဘဲ အစားအသောက်ကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလေးပါ...။ နိုင်ငံခြားသားတော်တော်များများ လာထိုင်ကြတယ်...။ တစ်ခါတစ်ခါဆုံကြတိုင်း ကိုယ်ရယ် အစ်မမြသွေးရယ် အစ်မချစ်ရယ်သာ ပိုင်တိုင်ဖြစ်ကြတာ...ကျန်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေကတော့ တစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မတူကြတော့ဘူး...။
စတုတ္ထအကြိမ်က ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်းက Feel မြန်မာထမင်းဆိုင်မှာဖြစ်တယ်...။ ဒီတစ်ခါတော့ မမြင်ဖူးတဲ့ ဘလော့ဂါတွေတော်တော်များများပါတယ်...။ အားလုံး သဘောကောင်းဖော်ရွေကြတယ်..။ ချက်ပြီးသား မြန်မာထမင်းဟင်းလေးကို မချစ်နဲ့အတူလိုက်ရွေးပြီးမှာကြတယ်...။ စကားတွေအကြာကြီးပြောဖြစ်ကြတယ် ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြတယ်...။ ပြီးတော့ ရွှေဂုံဒိုင်ဖက်က ရွှေတိဂုံဘုရားကိုဖူးမြင်ရတဲ့ တိုက်အပေါ်ထပ်က ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ ထိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်...။
ပဉ္စမအကြိ်မ်က အစ်မရဲ့ ချစ်ကြည်အေးရဲ့ ချစ်ကြည်အေး စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းမှာဆုံဖြစ်ခဲ့တယ်...။ အစ်မကိုယ်တိုင်အမှတ်တရလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေးလက်ဆောင်ရခဲ့တယ်...။ အဲဒီပွဲလေးမှာ အမှတ်တရစကားလာပြောကြတယ် ဆရာမနှင်းဝေငြိမ်းဆို အစ်မကို စာရေးမရဲပါနဲ့ချစ်ကြည်အေးလို့မှာသွားခဲ့တယ်...။ ဆရာမ မိချမ်းဝေကတော့ စာအုပ်ထဲမှာ စကားပြောတွေသိပ်များလို့ စာဖတ်သူတွေဖတ်ရင်း နားငြီးသွားတတ်တယ်လို့ ဝေဖန်တယ်...။ တကယ် ၀ါရင့်ဆရာမကြီးတွေ ကိုယ်တိုင် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ဝေဖန်တော့ နားထောင်ရင်း ကြက်သီးတောင် ထမိတယ်..။ အင်းလေ... ဒီလိုဝေဖန်မှုရှိမှ အရေးအသားက တိုးတက်မှာကိုးး..။
ဆဌမအကြိမ် ကိုညီလင်းသစ်လာတုန်းက ကမ်းနားက ဂျူ နီယာDuck ရွှေဘဲဆိုင်မှာထပ်ပြီး ညစာအတူစားဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်..း)...။
အစ်မနဲ့ ကိုယ်က မွေးရာသီခြင်းတူကြတယ် မိန်ရာသီတွေလေ.. အနုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးသူ စ်ိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းသူ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သူတွေပေါ့...။ ဒီပို့စ်လေးက အစ်မရဲ့ ဒီနေ့ 25ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရရေးဖြစ်တာပါ ။ ဖဘမှာ တော်တော်ပြောကြသလို အပြင်မှာ အစ်မနဲ့တွဲပြီးတွေ့ကြရင်လဲပြောကြတယ် မိုးငွေ့က မချစ်ညီမလေးလားတဲ့...။ တအူတုံစင်း ညီမတွေမဟုတ်ပေမယ့်လည်း ညီအစ်မအရင်းတွေလိုပဲ ချစ်ခင်ကြပါတယ်လို့...။ အစ်မကို မွေးနေ့မှစလို့ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံပြီး အစ်မလုပ်ချင်တဲ့ အနုပညာအလုပ်များကို ဆထက်ပိုးလုပ်နိုင်ပါစေ... အစ်ကိုကြီးကိုပန်းသီးနဲ့လည်း သက်ဆုံးတိုင် လက်တွဲတွေခိုင်ခိုင်မြဲပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းလိုက်ပါတယ်...း)
~~~~~ Happy Birthday ~~~~~
˙·••●♥.....I Love you, CKA......♥●••·˙
Posted by Cameron at 11:00 10 comments:
နက်ပြာရောင်ကောင်းကင်မှာ မီးပုန်းလေးတစ်လုံးချိတ်ဆွဲထားတဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့ တပေါင်းလပြည့်ကျော်ရဲ့ လရောင်ဝါ၀ါ…. သူနဲ့သိပ်မနီးမဝေးလေးမှာ လင်းလက်နေတဲ့ကြယ်ကလေးတစ်လုံး… နှစ်လုံး… ဟုတ်တယ် ကောင်းကင်ပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ လ၀ါဝါရယ် ငွေကြယ်လေးနှစ်လုံးရယ်ပဲ ထင်သာလင်းပနေကြတယ်…။ နွေဦးလေက ခြောက်သီးခြောက်ကပ်တိုက်ခတ်လာတော့ ကိုယ့်ဆံနွယ်တွေလွှင့်ပျံကုန်ကြတယ်…။ မင်းကို ဆွတ်ဆွတ်ပျံ့ပျံ့လေးလွမ်းအောင်များ ပံ့ပိုးတိုက်တွန်းပေးနေကြသလား…။ ကိုယ်ဖုန်းကောက်ကိုင်ပြီး မင်းဆီကို မက်ဆေ့ပို့ဖို့ လက်ခံသူနေရာမှာ မင်းနာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး မင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုရှာလိုက်တယ် မင်းနာမည်လေးပေါ်လာချိန်မှာ done ကိုနှိပ်ဖို့ ကိုယ့်လက်တွေတွန့်ဆုတ်နေကြတယ်…။ နောက်ဆုံးကိုယ်ဖိချလိုက်တယ်…. done တော့ မဟုတ်ဘူး… cancel ကိုပါ…။ တကယ်တော့လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆွဲထည့်စရာမလိုပါဘူး… မင်းကိုလွမ်းတဲ့ ဓါတ်ခံက နဂိုကတည်းကိုက နှလုံးသားရဲ့ တောင့်တနေရာမှာ ကိန်းအောင်းနေပြီးသားမဟုတ်လား..။ ဒါကို ကိုယ်မေ့ထားလို့ လစ်လျူရှုထားလို့ ခဏပဲရချင်ရမယ်လေ….။ အိန်ဂျယ်ရယ်….ကိုယ်လေ အခုမင်းနဲ့သေမလောက်အောင် ဖုန်းစကားပြောချင်နေတယ်..။ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ဖုန်း၊ မင်းနာမည်လေးကို ခလုတ်ကလေး တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ မင်းအသံကို ကိုယ်ကြားရမယ်….။ ခုမင်း ဘာဖုန်းကိုင်နေလဲ အရင်လိုပဲ Black Berry ကိုင်တုန်းလား ဒါဆို ကိုယ်မင်းဆီကို မြန်မာဖောင့်နဲ့ပို့ရင် အရင်လိုပဲမင်းဘယ်မြင်ရမလဲနော်…။ ဒါမှမဟုတ် မင်းတခြားဖုန်းပြောင်းကိုင်နေပြီလား….။ ဒါပေမယ့်ကွယ်….. ကိုယ့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပြောသလိုပဲ… နှလုံးသားအရေးထဲကို ဦးနှောက်ပါလာရင် အဲကိစ္စဟာ အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ ရုပ်လုံးကြွဖို့က သိပ်ကိုခက်ခဲသွားပြီဆိုတာ သိပ်မှန်တာပဲ….။ နှလုံးသားကိစ္စကို နှလုံးသားကပဲဆုံးဖြတ်ပါစေပေါ့လို့… ကိုယ့်ဦးနှောက်တွေက အမြဲတစေတားဆီးပိတ်ပင်ထားကြတယ်……။ နှလုံးသားကနာကျင်ခံခက်စွာနဲ့ မျက်ဝန်းနှစ်ဖက်ဆီကနေ မျက်ရည်တွေအဖြစ် သွန်ချလိုက်သလို နာကျင်စူးနစ်တဲ့ဝေဒနာတွေက လည်ချောင်းတလျှောက် ခါးသက်စွာစီး ဆင်းသွားကြတယ်…။
ကိုယ့်မှာ ဒီလိုပဲ တီးတိုးညည်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ် အိန်ဂျယ်….။
မင်းသိလား… ကိုယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် ကမ်းခြေကိုရောက်ခဲ့တုန်းက မင်းကို ကိုယ်ဘယ်လောက် သေမလောက် သတိရနေခဲ့သလဲလို့ လွမ်းဆွတ်နေခဲ့သလဲလို့…။ ကိုယ့်ရဲ့ကမ်းခြေခရီးတွေမှာ ခုတစ်ခေါက်က ကိုယ့်ကို ပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်ဆုံးပဲ….။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကိုယ်နေတဲ့အခန်းဘေးမှာ မင်းတို့လိုပဲ ဂီတာတီးပြီးသီချင်းတွေဆိုတဲ့ လူငယ်တစ်သိုက်ရှိနေတယ်…။ မင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ ကိုယ်နေရာကနေမင်းတွေးကြည့်ပေးပါ… ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိမင်းကို လွမ်းလိုက်မလဲလို့…။ ကိုယ်လေ… ညဖက် သောင်ပြင်ဖက်ကိုလမ်းလျှောက်ကြည့်တယ်…။ ညကမှောင်မိုက်တိတ်ဆိတ်လွန်းလို့ မင်းတို့တုန်းကလို မီးပုံပွဲလုပ်မယ့်သူလဲမရှိဘူး….။ ဟိုးး နေရာလေးမှာပေါ့ မင်းနဲ့သူငယ်ချင်းတွေ မီးပုံပွဲလုပ်ပြီး သီချင်းတွေဆိုကြတာလေ….။ အဲဒီတုန်းက မင်းကို ကိုယ်ခပ်ဝေးဝေးက ငေးမောပြီးပဲ ကြည့်ခဲ့ရတယ်…။ မီးပုံပွဲမလုပ်ခင် ကိုယ့်အခန်းရှေ့ကနေ မီးပုံပွဲအတွက် စားစရာတွေသယ်ပြီး ဖြတ်သွားတိုင်း မင်းက ကိုယ်သိပ်ကိုစွဲလန်းမြတ်နိုးလွန်းတဲ့ အပြုံးဖြူဖြူလေးတွေ ခြွေချတတ်တယ်…။
မင်းအပြုံးတွေနဲ့ဝေးနေခဲ့ရတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ အိန်ဂျယ်….။
မင်းမျက်ဝန်းတွေဆီက တောက်ပတဲ့ကြယ်ပွင့်ကလေးတွေကို မမြင်ရတာလဲဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ… ။ ဂျစ်ကန်ကန် ဘုကျကျ မင်းနှုတ်ဖျားဆီက စကားလုံးတွေလဲ မကြားရတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ…။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်အကျဉ်းချထားရတာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းလဲ မင်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူး….။
ကိုယ်အတွက် ထွက်ပေါက်ဆိုလို့…. မင်းတိတ်တဆိတ်လာပြီး ဖတ်ခွင့်ရှိတဲ့ ဟောဒီနေရာလေး တစ်နေရာပဲ ရှိတာပါ…။
ဘယ်တော့မှလဲ ခြေရာတွေထားသွားမှာမဟုတ်တဲ့မင်းဆီက ကျေးဇူးပြုပြီး မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါလားလို့ တောင်းဆိုဖို့ အသင့်ရဲတဲ့ ကိုယ်ကသာ ရူးနှမ်းသူတစ်ယောက်ပါ…။
Posted by Cameron at 15:29 1 comment:
“မီရေ...ဒီမှာခဏထပြီးလာကြည့်ပါဦး ကိုယ့်အပင်ကို ဘာကောင်လာယက်သွားလဲ မသိဘူး မြေကြီးတွေလဲ ပွလန်ကျဲလို့”
အိမ်ရှေ့ဝရံတာမှ တကျော်ကျော်အော်နေသော မောင့်အသံကြောင့် ကျွန်မမျက်လုံးပွတ်ပြီး ခေါင်းရင်းက နှိုးစက်နာရီလေးကို လက်နှင့်စမ်းယူကြည့်လိုက်တော့ မနက် ခြောက်နာရီထိုးပြီး ငါးမိနစ်စွန်းရုံရှိသေး...။ တနင်္ဂနွေမနက်မှာ ဘာအတွက်များ မောင်ကစောစောစီးစီးထပြီး ၀ရံတာရောက်နေရသတုန်း...။ မှန်တင်ခုံပေါ်က ခေါင်းစည်းကြိုးလေးယူပြီး ဆံပင်ကိုခပ်မြင့်မြင့်စုချည်လိုက်၏...။
အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းရောက်တော့ အလင်းရောင်ခြည်က ၀ိုးတိုးဝါးတား မြူတွေထူထပ်စွာ အုပ်စိုင်းနေကြသည်။ မောင်တစ်ယောက်တော့ သူ့အပင်အိုးလေးနားမှာ ကုံးကုံးကွကွနဲ့..။
“ဘာဖြစ်တာလဲ မနက်စောစောစီးစီး အသံတွေထွက်နေတယ် ဒီမှာ သူများကအိပ်မက်လို့ကောင်းတုန်း”
“ဒီမှာလေ... ကိုယ့်ရှားစောင်းပင်အိုးထဲ ဘာအကောင်လာယက်သွားလဲမသိ မြေကြီးတွေလဲ ပွကျဲပြီးကျနေတယ်...”
မောင်ပြောတော့ သူ့အပင်အိုးထဲကိုကြည့်လိုက်မိသည်...။ အပင်ကိုတော့ ဘာမှမလုပ်ဘဲ မြေကြီးကိုလက်နှင့်လျက်ထားဟန်တူသည်...။ အပင်ခြေရင်းကမြေကြီးမှာ ကျင်းသေးသေးလေးတောင် ဖြစ်လို့နေသည်။
“ကြောင်ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်... အင်းး ဒီတိုက်မှာ ကြောင်မွေးတဲ့သူလဲမရှိပါဘူး တခါမှမတွေ့ဖူးဘူး ငှက်များဖြစ်မလားဟင် ... ဒါဆိုရင်တော့ မောင် စီတီအဟောင်းတချပ်ရှာပြီး ကြိုးချည်ဒီအပင်နား တွဲလောင်းချိတ်ထားလိုက်”
မောင်က သူ့အပင်ကိုမြေကြီးပြန်ဖို့ရင်း ကျွန်မကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်..။
“အမယ် မီက ဒါတွေဘယ်က ဘယ်လိုသိနေရတာတုန်း အပင်စိုက်တာဖြင့် ၀ါသနာတောင် မပါဘဲနဲ့...”
ကျွန်မက လက်ကလေးပိုက်ပြီး တံခါးဘောင်လေးကိုမှီလျက်က မောင့်ကို ဆရာကြီးလေသံနှင့်ပြန်ဖြေလိုက်လေသည်..။
“အော်... ဒီလိုပါပဲ.. စာတွေဖတ်ထားတော့ ကြားဖူးနားဝကရှိနေတယ်လေ...စမ်းကြည့်ပါ.. တကယ်ထူးခြား မထူးခြားသိရအောင်ပေါ့ ”
မောင်သူ့အပင်ကလေးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတုန်း ကျွန်မကတော့ ၀ရံတာလက်တန်းပေါ်လက်တင်ရင်း မနက်စောစောလေကို အားပါးတရရှူနေလိုက်သည်...။
“ မီ ပြီးရင် ပြန်ဝင်အိပ်မနေနဲ့ဦးနော်... ကိုယ်နို့ဖျော်ထားပေးတယ်... ပဲပြုတ်ထမင်းလုပ်ထားတယ် ကြက်ဥကြော်နဲ့..”
ပိတ်ရက်ဆို မောင်က အဲဒီလို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ကျွန်မကို ပြုစုတတ်သေးသည်..။
“ဟုတ်ကဲ့... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချစ်သောမောင်... သြော်...နေထွက်ရင် မောင့် Cactus အပင်လေးတွေကို နေပြရဦးမယ်နော်...”
ပြီးခဲ့သည့်တစ်ပတ် မြေပဒေသာကျွန်းမှ မောင်ထပ်ဝယ်လာခဲ့သော လက်တဖ၀ါးကိုင်စာ အရောင်စုံ ကန္တာရဆူးပင်ကလေး..။ တပတ်ကိုရေတခါလောင်း ငါးရက်တခါနေပြရမည်ဟု ဆိုင်ကမှာလိုက်သည်ကို မောင်မမေ့အောင် ကျွန်မက သတိပေးအချိန်ဇယားကလေးလုပ်ပေးထားသည်...။
ရုက္ခဗေဒဘာသာနှင့်ကျောင်းပြီးသူမို့ အပင်စိုက်ဝါသနာပါတာမဆန်းပေမယ့် ကျွန်မတို့လို တိုက်ခန်းကျဉ်းနှင့် နေသူများ ပန်းပင်ပန်းအိုးများထားစရာနေရာမှာ လသာဆောင်မှလွဲ၍ အခြားမရှိတော့..။ ဒါကြောင့်မောင်က သိပ်မနုမယုယဘဲ စိုက်ရလွယ်ကူသည့် အပင်များကိုသာရွေးချယ်ဝယ်ခဲ့ ဟန်တူပါသည်...။ ကျွန်မက အပင်စိုက်တာ ၀ါသနာမပါပေမယ့် မောင့်အတွက်အပင်စိုက်ဖို့ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ကိုတော့ ဈေးဝယ်ထွက်တိုင်းတွေ့ရင် ၀ယ်ဝယ်လာပေးပါသည်..။ ကျွန်မက မောင့်ရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဖက်မဟုတ်လား...။
တစ်ညမှာ ထမင်းစားကြပြီး တီဗီရှေ့ရောက်နေချိန်... မောင်က သူ့ရှာစောင်းပင်မှ တဖတ်ခွာယူကာ အခွံစိမ်းတွေဓါးနှင့်လှီးပစ် အတွင်းပိုင်းမှ ဂျယ်လီကဲ့သို့ကြည်လင်းအေးမြသော အတုံးကလေးများနှင့် မျက်နှာလာပွတ်ပေးပါသည်...။ အသားရေကောင်းသည် ဟူ၏ ။ တဖန် ဆံပင်ဦးရေအေးမြအောင်လို့ ခေါင်းမလျှော်ခင် ဦးရေကိုပွတ်ပြန်၏...။ အစာအိမ်အတွက် သွေးတွင်းအဆီကျဖို့အတွက် သကြားနဲနဲနဲ့ဖျော်သောက်ရတာနဲ့ မောင်တစ်ယောက် သူ့ရှားစောင်းလေးအသုံးဝင်ပုံကို တမျိုးပြီးတမျိုး မရိုးနိုင်စွာလုပ်ပါတော့သည်...။
မောင်က ဘုရားပန်းကပ်ဖို့ အိမ်အလှပန်းအိုးထိုးဖို့ တခါတလေအလုပ်သွားလျှင် ကျွန်မခေါင်းမှာပန်ဖို့ အလှပန်းကလေးတွေစိုက်ချင်တာပါတဲ့...။ ဒါပေမယ့်လည်း နေရာမရှိတာရယ် အပင်တွေကို ပျိုးထောင်ဂရုစိုက်ဖို့ အချိန်မရတာရယ်နဲ့ အဲစိတ်ကူးကို အကောင်ထည်မဖော်တော့တာ...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မကတော့ အပင်လေးတွေကို ချစ်တတ်သော မောင့်လိုလူမျိုးနှင့်လက်တွဲဖော်ဖြစ်ရလို့ ၀မ်းသာပီတိ ဂွမ်းဆီိထိပါ၏...။
Posted by Cameron at 11:01 8 comments:
Posted by Cameron at 13:187comments:
Posted by Cameron at 12:207comments: